Buka: UWiro uthi ufuna abantu bazi ukuthi uManana ubaphatha kanjani abesifazane | News24
Buka: UWiro uthi ufuna abantu bazi ukuthi uManana ubaphatha kanjani abesifazane
Johannesburg - Obengumsizi wasendlini kaMduduzi Manana uthi ufuna ukulimbula izinqa obala ilungu le-African National Congress (ANC) ePhalamende ukuze izwe lazi ukuthi libaphatha kanjani abantu besifazane.
UChristian Wiro uhoxise icala lokushaywa ebelibhekene noManana ngoMsombuluko ngenxa yokwesabela impilo yakhe kodwa abezindaba i-Eyewitness News ikholwa wukuthi amaphoyisa asaliphenya leli cala njengomuyalelo weDirector of Public Prosecutions.
UWiro usola uManana ngokumdushela phansi emastebhisini ngempelasonto, ukumsabisa ngokumbuyisela eZimbabwe wabe esethi uzomnika imali enguR100 000 ukuze ezohoxisa ixala.
ITimesLive ikhiphe inkulumo eqoshiwe yalezi zinsolo.
UWiro usebenzele uManana amasonto amabili, uchaze ukuthi ubesebenza kanjani kusukela ngezithuba zabo-06:00 ekuseni kuze kushaye izithuba zabo-22:00 ebusuku sekuyolala uManana.